Madaxda maamul goboleedyadda oo ku wajahan Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxda maamul goboleedyadda oo ku wajahan Garowe
Madaxda Galmudug, Jubbaland ayaa la xaqiijiyay in ay maanta tagayaan Magaalada Garowe, waxaana Garowe ka socota soo dhaweynta Madaxda maamul goboleedyadda iyo sidoo kale haddii ay taggaan xubno ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya, Maadaama lagu casuumay.
Madaxweyne Saciid Deni ayaa shirkaan ku casuumay Madaxda dowladda Federaalka sida Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, Madaxda Maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koofur Galbeed.
Wali ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dowladda dhexe ee Soomaaliya ee ah in ay ka qeyb galayaan Shirka berri ka furmaya Magaalada Garowe.
Shirka Berri ka furmaya Magaalada Garowe ayaa ku soo aadaya, xilli uu dib u dhacay shirkii Golaha Amniga Qaranka ee Apriil ka dhici lahaa Muqdisho, sidoo kale waxaa baaqday shirkii horay loogu balamay inuu ka dhaco Garowe bisha Maarso, kaasoo lagu dhawaaqay xilligii caleema saarka Madaxweynaha Puntland.
Soomaali booliis ka ahaa Maraykanka oo lagu helay in uu dil gaystay
Somali police detain dozens in security operation in Mogadishu